DAAWO: Maxaa laga filan karaa Shirka Dhuusa-Mareeb ee hadda la Iclaamiyey?
January 31, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 10
MUQDISHO(P-TIMES) – Bilowgii bishii Luulyo & August dhamaadkeedii sannadkii na weydaartay ayay Dhuusa-Mareeb oo ah caasumad dawlad gobaleedka Galmudug, waxay martigalisay kulamo 3 jeer qabsoomay oo looga hadlayay arrimaha geedi socodka doorashooyinka dalka, waana halkii lagu soo afjaray noocii Doorasho ee qof iyo cod & Mudo kororsi ay helaan Hay’addaha dawladda Faderaalka Soomaaliya.
Xiligaas Madaxweynaha Galmudug ayaa ahaa laacibka siyaasadeed ee isagoo 5bilood hoggaanka jooga ku guuleystay, in uu isku keeno Madaxda dawlad gobaleedyada & Dawladda Faderaalka Soomaaliya, laakiin khilaf weyn ayaa ku yimi wareegii u dambeeyey wada hadaladaas, markii ay xaadiri waayeen maamulada bah-wadaagta ah ee Puntland & Jubbaland.
Markale, Dawladda Faderaalka waxay iclaamisay kulan cusub oo ka dhici doona Dhuusa-Mareeb, markan gogasha waxaa kudhawaaqideeda leh dawladda Faderaalka, waxaana shir gudoomin doona Madaxweynaha DF Soomaaliya ee maalmuhu uga hareen mudo xileedkiisa, Madaxtooyadu waxay sii xadiday waqtiga ay kulamadan socon karaan oo ah Isniin ilaa Arbacada ugu horeysa bisha Feberaayo, taas oo durba laga dhex eegaya xalka imaan kara.
Durba siyaabo kla duwan ayaa looga hadlayaa qodobada kasoo bixi kara kulankaas oo xiligan muhiim u ah Arrimaha doorashooyika ee dalka, gaar ahaana marka ay joogto in lahelo xal wadajir ah oo ka wada yimaada dhammaan dhinacyada is haya.
Somalo Italiano isma xukumi karaan nearly 40 years ayay iska daba wareegayaan caqligiina waa ka guuray,
Hadii xitaa Tuug Armaajo Neef la bedelo mid kasii liita ayaa dusha looga keeni doonaa waayo Talada Somalo Italiano XALANE ayaa laga Go’aamiyaa.
Caamada iyo kuwa u guulwadeeya Armaajo iyo Mafiyada Qurbaha kasoo wada yaacay ee Xoolaha masaakiinta boobaya waa wada dambiilayaal Xaaraamiina waa in degdeg Mulkiilayaasha Xamar Vilada gacanta ugu dhigaan 8febuary.
Inkastoo uu dur dur iyo Dabaal galo, DOOFAAR weligii ma daahiro!
Si kastoo uu Iidoor is qariyo, waa kii un Dacaqun Daarood nahayb ah ugu dambeyn sii daayo!!!!
Mareeg uu Daarood leeyahay ayaad saf ugu jirtaan oo aad habeen iyo maalinba ka soo dhex toostaan, haddana nacaybka aad Daarood u qabtaan ma qarsan kartaan!!!!
Hawiyaha aad la hadashay ee aad milkiila yaasha ku sheegtey Dan iyo heello haddii aad ka leedihiin, ka daaya qaraxyada iyo Shabaabka aad u soo direeysaan, Daarood awal buusan Soomaalinimo idinka dugsaneyne!
Idigu kuwa laga masuulka yahay ayaad tahay.
Waxaad ku qadhaabataa magaca YAA DAAROODAAY Waayo kuwa Saynta daba kaga yaal ayaa tahay DAAROOD KKKKKKKKK.
Markaa waa gartaa inaad isku dhex qariso Magac kale ileyn waxaad tahay 0.1% dhulka Somaliland.
Yaa DAAROODAAY kuwaalo ilaa qiyaamaha aan kuugu dhaarto inaan lagaa neefineyn Yaa Xawayaan Minority ah.
Waryaa Waroos iyo dhuloos waa Somaliland cirka iyo dhulka midkaad doonto U bax wax laga bedeli karo Ma jirto Ama barooro ama Yaa DAAROODAAY sidaadii.
Dhulku ma guuro dadkaa guura.
If you dont want our promise land Somaliland get fuck off bloody idiot.
Reensheeg. Beensheegow. Markaad leedahay warsangeli iyo dhulbante dhulkooda anagaa leh. Miyaad ulowday in aad lasxanood ku joogtid maganta jaamac siyaad iyo Inna canbaashe. Nimankaasina realiy dhulbante Marka wakhtigeeda la gaadhan iyagaa xabadda kugu bilabaya.
Madaxa iyo Sayta hal jir bay ku wada yaalaan, Laakiin Wallaahi xitaa haddii aan Daarood kan ugu liita ahay, Mar waliba waan ka sarreeysa Daba cayuun Iidoor!
Nimanka aad u dardaar wesisay ee aad tiri dad baa guuro ee Dal ma guuro ee aad dhulkooda ku sheegtey, “Our promised land” waa raggii lahaa Daraawiish iyo Saldanadii Warsangeli oo markii aay Awoowe yaashaa Ingiriis dusha ku qaadi jireen kaa xureeyey!
Haddana Wallaahi in aaysan Daarood kuugu tago u baahney oo iyaga Gar Adag cusub kugu dhigi karee, Sixir baad ku kala dishay oo dabiib bay u baahan yihiin iyo in aay Qur’aan akhristaan. Markaa kadibna xaalkaagu waa, iska Daarood ku fuul. Kkkk
Caydu waa xagaaga xaasha inaan Daarood caayo waa igu ceeb,laakiin adigu xaarka iska walaaqo sidii XUURTII kkkkk.
Waan kuu garaabayaa inaad cay ku ciilbaxdo waayo awoodaada intaa leeg.
Xaqiiqdaa ku dhibaysa oo aad ka gubaneysaa laakiin Arinta biyo kama dhibcaanku waa Somaliland dhulkeeda cidina waxba kama bedeli karto Do What ever you want Somaliland going no where what ever it takes you named even 50 years.
Meelahaa ka muusanow sidii dumarkii Ciil kamakore Ciilan inaad tahay way kaa muuqataa yaa Xayawaan Cuqdadi googoysey.
Wali waxaad ka quusan la’dahay kacaankii Adeerkaa Afweyne ee xaaraanta iyo baada kugu soo koriyey ee Afka ciida loo daray kkkkkk .
Waad ka quusan ladahay waayo dhadhan baad ku barateen iyo in xoolo aan la shaqaysan ee masaakiinta layska boobo.
Ilaahay ayaa caadila noocaagaas oo kale ayaa midnimo bug ah iyo wadaniyad been ah ku sheekeeya Munaafaq.
Waa Alah mahadii in dadka inta wanaaga somaliland jecel ay marhore geed isaga xidheen Daalimiinta noocaaga oo kale munaafiqiinta ah ilmada Yaxaaskana Daadiya Eri Boowe Lays barey kkkkkk.
Dadku waa isu ehel iyo tol baa aniga Cali geri reerka la yidhaahdo Waa Aayo adeer, ayeeyo,ilmaamtiyaday dhinac walba,Naaleeye Axmed sidoo kale Waa aayaday abtigay Qabay, waar xagee Lookala wadaa Reer somaliland Waar miyaad waalan tihiin.
Sool Isaaq waa degaa, SANAAG Isaaq Waa degaa, TOGDHEER Dhulbahante Waa degaa SAAXIL Warsangeli waa Degaa, Bal waakaase Yaa Kala guri kara.
Waar waalida iyo Hadal madhaleyska aan waxba tarayn halayska daayo Dalka Somaliland waa inaga wada Dhaxeeyaa ninwalbow Dhinacaga qaba Bahashu Hawada Ha gashee inaga daaya Xinkan iyo Hadal Candhabuurta Qabyaaladeysan.
Magaca soo baxaya markaad eegtid iyo meesha uu fadhiya wallahi waa Hargeysa Ahmed baana ugu qoran numberkiisa munaafaqan iidoor bal eega Google mapkan maxay naga rabaan ciyaalkan iidoor ee website yada dadka Reer puntland cayda lataahan every day sow may oga inaynu technology ga noqaano war adaa wax arkay SIXIR kooda iyo shaatiga shaydaanka ee ay hadba magac u bixinayaan mar waa AKHWAAN iyo HASSAN DAAHIR AWEYS, mar waa GAFUUR DUUB ALSHABAAB ALSHAYDAAN oo masaajida looga tukun la’yahay maxaynu yeelnaa?
Maxaa laga filan karaa Shirka Dhuusa-Mareeb ee hadda la Iclaamiyey?
Waxey wax kasta ay ku xiran yihiin Puntland iyo Jubbaland, mowqif iyo arragtida 2 dowladeed Goboleed ee xalaasha ah ee ka madax banaan Ismaqiiqe farmaajo. Wixii ka soo hara 2 Puntland iyo Jubbaland rayigooda iyo damacooda wax ka soo qaad ma leh.
من السهل لأي واحد عنده وعي وفطنة ان يتنبأ نتيجة المؤتمر المزمع انعقاده في دوسامريب، قبل كل شيء يعتمد الموقف الذي يتخذه زعماء بونتلاند وجوبالاند ورؤيتهما السياسية المستقبلية. اذ رأو ان المؤتمر له فوائد للأمة الصومالية فلاشك انهم يقفون موقف إيجابي والعكس صحيح.ا